MACMACAANKA SARE EE DALXIISKA EE HUNGARY: SHARAXAAD KA MID AH TARANKA, GAAR AHAAN CONTENT - BEERAHA DIGAAGA
Macmacaanka sare ee xayawaanka ee Hungary: Taariikhda asalkiisa, sharaxaad, content
Beeraley badan ayaa ku hawlan taranka iyo dayactirka nadiifinta caleenta, kuwaas oo ka qaybgalaya bandhigyo iyo tartamo kala duwan. Maanta waxaad ku baran doontaa jiilka xiisaha leh ee xayawaanka Hungarian iyo wax ka barto heerkiisa.
Tixgeli xaaladaha xabsiga iyo daryeelka, iyo sidoo kale kuu sheegi kara cuntada saxda ah shimbirahan.
Tani waa jinsi yar, xulashada kaas oo si rasmi ah ugu hawlan 1941, laakiin ilo badan ayaa tilmaamaya in dadaallada la sameeyay bilowgii qarnigii 20aad.
Waddanka reer Hungary ee xamaamyada sare ee duulimaadku waa magaalada Čapel, halkaas oo Budapest qafwiidka xayawaanka loo isticmaalo sida wax taranta.
Waa muhiim! Wareegtadu waxay ku xiran tahay xamaamyada sare ee duulaya, sidaa daraadeed waxa badanaa suurtogal ah in la daboolo astaamahan bilowga magaca.
Shimbiraha waxaa lagu kala soocaa maqnaanshaha foomamka adag, madax yar, iyo sidoo kale jidhka cufan, garaacid. Indhaha oo ka soo horjeeda dabeecadda madaxa yar ayaa u muuqda mid weyn, iyo gogol saddex xagasha yar yar.
madaxa - oval, laynka wejiga waa siman;
indhaha - Maqalka, iris midabo leh oo midabo madow leh;
gagaarka - qaro, iftiin, hoos u tilmaamaya;
qoorta - dherer dhexdhexaad ah, cidhiidhi galka madaxa oo u fidiya jirka;
laabta - musqulo, wax yar oo kor u kacsan, yar yar oo dillaac ah, ballaaran dhexdhexaad ah;
baalasha - foomka caadiga ah, oo adkeysiga jirka, dhererka iskuma xidhna;
daboolka - cidhiidhi, miisaan dhexdhexaad ah, dhul lama dalbanayo;
midab baal - Kala duwanaansho, badanaaba midabada bunka iyo cawlada ayaa laga helaa, waxay yeelan karaan midab baraf cad.
Baro naftaada xayawaanka sare, kalluunka iyo xamaamyada duurjoogta ah, noocyada qaxwaha, caleemaha qashinka, noocyada kiniisadda, iyo xamaam yaryar.
Shimbirtu waxay leedahay dabeecad adag, iyo sidoo kale xusuus aad u fiican, taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku xasuusato wadada duulimaadka. Qoryaha wuxuu duuli karaa in ka badan 100 km, ka dibna ku noqo guriga. Celceliska wakhtiga duulimaadka aan kala go'a lahayn waa 8 saacadood.
Shuruudaha roodhida aan loo baahnayn
Dhirirka jirka oo ka badan 45 cm.
Lugaha dheeriga ah ama aad u gaaban.
Kari la'aanta jirka.
Muuqaalka muuqaalka kor ku xusan ee wejiga.
Qalabka cad ee indhaha.
Gaaban ama dhuuban oo dhuuban.
Indhaha Iris, oo rinjiyeynta midabyo kala duwan.
Ma taqaanaa? Qoollo ma dhigi karaan ukumo kali ah oo kali ah, iyo sida shirkadu u dhaqmi karto qoolley kale, laakiin ma aha labka. Marka la haysto, muuqaalkani waxa uu marayaa muraayad.
Ka fikir shuruudaha "Hungari" xaaladaha xabsiga iyo cuntada.
Qaansiirku lama barbar dhigi karo ducks ama digaagga, maadaama ay u baahan yihiin meelo dheeraad ah, iyo sidoo kale meel fog oo dhulka hoostiisa ah. Sababtan awgeed, mulkiiluhu wuxuu ku qalabaysan yahay qiiqa, halkaas oo shimbiruhu ay fursad u leeyihiin inay si xor ah uga soo baxaan saqafka.
Qalab loogu talagalay sii deynta xayawaanka Hungarian ah
Xarumaha ayaa horay loo nadiifiyey dhammaan qashinka, waa la nadiifiyaa, waxay dillaacaan dhammaan dildilaaca. Dhinaca wareegga, isku midka ah ee lagu xiro unugyada ayaa la aasaasay kaas oo ay xamaamyadu ku nasanayaan. Cabitaanka iyo quudinta waxay ku yaalliin dabaqa. Haddii xoriyadda shimbiraha la xadidan yahay, markaa waa in la sameeyaa qafisyo ballaaran oo ay ku jiraan xamaamyada aan khatar ku jirin. Unugyada waxaa laga sameeyaa shabakad leh unugyo yar yar.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la sameeyo daaqadaha duulimaadka shimbiraha, xajmiga oo aan ka badnayn 20x20 cm, waa la dejiyay si aan loo hirgelin dhismaha guriga qoryaha.
Shimbiraha, sida shimbiraha kale, waxay u baahan yihiin beddelka caadiga ah ee qashinka, taas oo aan yareynin oo kaliya waqtiga goosashada, laakiin sidoo kale ka ilaalisa hypothermia xilliga jiilaalka. Qalabka la isticmaalo waa balka ama peat qalalan.
Waa muhiim! Waa mamnuuc inaad isticmaasho kubadaha xumbo ee sariirta. Xamaamadu waxay bilaabaan inay cunaan, kadibna waxay u dhintaan xannibaad xiidmaha ah.
Maalin kasta waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso nuujiyeyaasha iyo roogagga iyadoon loo isticmaalin kiimikooyin fara badan. Toddobaadkii mar waxaa lagama maarmaan ah in la tirtiro cunaha, iyo sidoo kale in la bedelo qayb ka mid ah dabaqa. Iyadoo cufnaanta sare ee beerto, qashinka ayaa si buuxda loo bedelay 3-4 cisho kasta.
Sanadkiiba laba jeer, nadiifinta guud waa la qaadaa, taas oo ay ku jirto nadiifinta nadiifinta qolka iyo alaabooyinka, iyo sidoo kale xakamaynta saqafka iyo derbiyada, haddii aanay daboolin.
Xilliga jiilaalka, heerkulka qolka waa inuusan hoos udhicin + 7 ° C, haddii kale shimbirta ayaa soo saari doonta astaamaha hypothermia. Xilliga kuleylka, heerkulka waa in lagu hayaa gudaha + 20 ° C. Sidaa awgeed, hawo-qaadashada waa lagama-maarmaan ah, oo ay ka kooban tahay tuubo iyo tuubbo biyo leh: mid waxay ku taallaa dhererka 15 cm dhulka, iyo kan labaadna waxaa lagu muujiyaa hoosta salka. Noocyo iyo xidhmo ayaa lagu rakibay.
Soo ogow waxa ay yihiin sifooyinka qoob-ka-xamaaradda caanaha, Volga lakin, Armavir gaaban oo la jarjaray, caddaan, Baku, Nikolaev, Turkiga Takla xamaarad, Agarana, qoob-ka-cayaar ee Özbeedka.
Ka dib markii ay soo iibsadaan xamaamadu waa inay sameeyaan qalabka gargaarka degdegga ah, oo ay ku jiraan daroogooyinka iyo qalabyada daryeelka degdegga ah, sida:
cirbadaha (3 ml);
suufka iyo faashadda;
Sidoo kale iska ilaali iibsashada fiitamiinada ka hor bilawga xilliga hawada qabow, si loo baabi'iyo hoos u dhaca difaaca jirka.
Cunto badan oo nafaqo ah ayaa keenaysa cayilka, taas oo ah sababta ukumaynta ukunta ay dhibayso, shimbirta ma duuli karto sida caadiga ah, dhibaatooyinka jirka iyo nidaamyada ayaa bilaabmaya. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in inta lagu jiro duulimaadka qoryuhu ku gubay badan oo kalooro, sidaas darteed ma samayn kartaa cuntada hadhuudhka ah, taas oo saboolka ah ee protein.
Ma taqaanaa? Shimbiruhu waxay leeyihiin aragti u gaar ah: naga duwan nooca, shimbirta ma indhotirta iftiinka qorraxda ama muraayadda mashiinka alxanka. Intaa waxaa dheer, xitaa iftiinka laysarka laysarka ah ma dhaawici karo indhaha indhaha. Isla markaa, waxay u arkaan 24 kiiloo mitir halkii labaad, sida dadka, laakiin ilaa 75, taas oo si weyn kor ugu kacda dareen-celinta.
Qiyaasta cuntada ee qaansiirka qaangaarka ah ayaa lagu soo bandhigay jadwalka hoose.
Nooca Cunnada Baahida xaga xagaaga,% Baahida jiilaalka,%
Bacaha 10 0
Lentils 0 10
Maydh 0 40
Hilibka 10 0
Barley 20 40
Corn 10 10
Vika 10 0
Dhalasho 20 0
Pea 20 0
Diirad gaar ah waxaa la siiyaa macdanta macdanta, kaas oo leh qaabka soo socda:
lebbiska casaan yar;
hilibka iyo lafaha cuntada;
milix cusbo (2 g / l).
Waa muhiim! Waa mamnuuc in la bixiyo badeecooyin ay ku jiraan maadooyin, dhadhan, kafeyn ama sonkor. Ha ku ridin qashinka miiska.
Haddii aanay suurtagal ahayn in la diyaariyo nooc ka mid ah macdanta macdanta, ka dibna waxa fiican in la iibsado wax-soo-saarka fiyuusiga diyaariya ee ku habboon taranka Hungarian.
Dherirka iyo digirta waxaa ku jira nafaqooyin ku filan, laakiin waxaa jira fiitamiin aad u yar. Sababtan awgeed, waa lagama maarmaan in la siiyo miraha iyo khudaarta maalin kasta. Feathery waxay bixisaa bocorka jar jartey, karootada, kaabajka, iyo sidoo kale tufaaxa, isteroberi, qaraha, watermelons. Waa muhiim in alaabtu ay ka madax bannaanaadaan kaluunka. Daaweynta kuleylka hordhaca ah lama fulin.
Talooyin faa'iido leh
Sii shimbirta leh ikhtiyaarka ka bixitaanka. Haddii shimbiruhu si joogto ah u fariistaan ​​qafiska, murqahoodu waxay noqon doonaan qoyaan, iyo dufan dufan ayaa bilaabanaya.
Xilliga qaboobaha, waa in aad kuleylisaa biyaha. Haddii aad isticmaashid khamriic furan, markaa dheecaankooda waa in la beddelo maalin kasta.
Isku hagaaji xaddiga quudinta qof kasta xilliga qaboobaha iyo xagaaga. Xilliga qaboobaha, xamaamku waxay u baahan yihiin nafaqooyin dheeraad ah si ay u ilaaliyaan heerkulka jirka.
Xaddid sida ugu badan ee suurtagal ah u hesho guriga roodhiga ah shimbiraha duurjoogta ah iyo xayawaanka kuwaas oo ah xakameyn kartid cudurada.
Soo ogow inta xabbo yaryar, siday u ilaaliyaan xamaamyada.
Qoolleylka Hungarian ma kala duwan yihiin dalabaadka xad-dhaaf ah, laakiin si loo ilaaliyo muuqaalka iyo awoodda duulimaadka ay tahay in si habboon loo quudiyo, ku hawlan tababbarka, iskuday duulimaadka. Xadka ugu sareeya ee loo galo dadka saddexaad ee guriga qoryaha si looga fogaado cawaaqib xun.
Qolka xayawaanka ee Hungarian: video
Faahfaahin ku saabsan waxyaabaha la soo saaray
HADDII AAD KA QAADASHO KOOXAHA CIMMADA ISKU DIYAARAYAA BARNAAMIJYADA SIDA LAGU HESHAY ISKU DARAYSO, WAXAA KA YIHIIN KARAA DHIBAATOOYINKA HALKAN! WAXAA LAGA CIYAARINAYAA WAXAA LAGU DHACAY.
Sanadka Cusub ee Isku-darka, Isku-darka, waxaanu ka sameysan karnaa bac ka mid ah casaan, 1 bac cad oo madow, 1 bac ah oo caleemo madow ah, 1 bac ah oo caleemo ah, kalluunka isku dar ah 3 baaldiyo, Hadda waxaan ku daraynaa in yar oo shaciir ah oo isku dar ah, 2-3 jeer bishii waxaan ku dari karnaa nadiifinta isku darka, digirta hadhuudhka yar, waxaan siinaa cannabis mar bishii,
Inta lagu jiro moult, waxaan ku dari karnaa geedka kaneecada, kufsi
Macdanta, Tilmaamaha, Shell sanadka oo dhan,